Ciidamada Booliska Oo Masjid Ku Yaalla Muqdisho Gudihiisa Hub Ka Dhex Helay+Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Booliska Oo Masjid Ku Yaalla Muqdisho Gudihiisa Hub Ka Dhex Helay+Sawirro
A warsame 8 July 2016 8 July 2016
Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya ayaa Howlgal ay maanta ka sameeyeen Masjid ku yaala degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho ku soo qabtay Huba lagu dhex qariyay Masjidka iyo labo qof oo arriintaasi ku lug yeeshay.
Taliyaha Ciidanka Booliska Saldhigga Degmada Yaaqshiid Gaashanle Dhexe Maxamed Yuusuf Nuur, ayaa sheegay in hubka lagu dhex qariyay Minaaradda Masjidka, ayna ku soo wargaliyeen Booliska dadweynaha ku nool Xaafadda.
Taliyaha Qeybta Guud ee Booliska Gobalka Banaadir Gashale Sare Bishaar Abshir Geeddi, ayaa sheegay in Hubkaasi uu ahaa mid qeyb ka ah Dilalka iyo amni darada ka dhacda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Talistka Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay in ay sii wadayaan howgalladda noocaan oo kale oo laga sameynayo meelaha ay ciidanka ay ka shakiyaan.
Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxaa ay Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya ay ka dalabadeen in ay la sheeqeeyaan si ammaanga guud ahaa gobolka banaadir loo adkeeyo.
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa xoojiyay Howlgalka lagu sugayo amaanka magaalada Muqdisho, si looga hortago isku day kasta oo ka imaan kara Al-shabaab.
Taliyaha CXD: Waa in ay ka feejignaadaan ciidamada ficilada cadowga